5 Mahara Mahara Hardware mapurojekiti atinogona kuvaka neLego zvidimbu | Mahara emahara
Joaquin Garcia Cobo | | dzidzo, 3D kudhinda, Robotics
Mahara Hardware rave rudzi rwehardware iri kuwedzera kushandiswa uye mukuda. Icho chikonzero cheichi ndechekuti mutengo wayo wakaderera uye yakakura software inoenderana inoita kuti iwanikwe kune wese munhu. Zvimwe chete zvinoitika nezvidimbu zveLego, chinhu chekutamba chakakurumbira uye chakashandiswa chinoita kuti chiwanike mudzimba dzakawanda uye zvakare chine mitengo yakaderera zvine mutsindo kuitira kuti isu vedu tisingatambe nezvidimbu zveLego, tinogona kutenga zvidimbu zvemhando iyi.
Tevere isu tichataura nezvazvo 5 Mahara Mahara Hardware mapurojekiti atinogona kugadzira nekushandisa nekutenda kuLego zvidimbu. Kune izvi isu tichatanga nezvidimbu zveLego zvatingawana mune chero imba nechitoro, asi kune yega yega mapurojekiti isu tichazoda zvimwe zvinhu zvakaita seArduino MEGA bhodhi, Raspberry Pi bhodhi, mwenje weLED kana LCD skrini. Zvese zvinoenderana nemhando yeprojekti yatinoda kuita.
1 Raspberry Pi kesi
2 Yakabatanidzwa matochi
3 Photographic kamera
4 Homemade robhoti kana drone
6 Ndiwo ega mapurojekiti aripo?
Raspberry Pi kesi
Iyo ingangove yechinyakare uye inonyanya kufarirwa chirongwa chine Lego zvidimbu (pasina kufunga nezve zvakavakwa zvevana). Iyo proyect ine gadzira dzimba dzakasiyana siyana kuchengetedza uye kuvhara Raspberry Pi mabhodhi. Kuzvarwa kwayo kwaikonzerwa nenyaya yekuti musiki aida rutsigiro rwekuchengetedza uye kuve nemabhodi eRaspberry Pi akati wandei. Pasina nguva, zvakaonekwa kuti Lego zvidimbu zvaigona kupetana seyakakura kesi yeRaspberry Pi mabhodhi. kana chero imwe mhando yeSBC bhodhi pamwe nekuve rutsigiro rukuru kune mamwe mabasa.
Pamwechete, tinogona kuvaka chitunha chakadai nezvidimbu zveLego zvatinoda, asi isu tinofanirwa funga nezve nzvimbo dzisina chinhu dzatinofanira kusiya kugadzira kubatana kuburikidza nezviteshi zveRaspberry Pi.
Kana isu tisingade kuvaka iyi kesi kana isu tichida kushandisa zvidimbu zveLego kune rimwe basa, tinogona kugara tichitenga nyaya yacho kuburikidza nezvitoro zvepamhepo zvakaita seAmazoni. Tinogona kuwana ino kesi yakajeka nemutengo wakafanana nematare epamutemo uye inowirirana zvizere neRasbperry Pi mamodheru.
Iyo yakasanganiswa tochi purojekiti ndeyepakutanga uye inosangana nekuve nekanaka kiyi netambo dzeLego. Pfungwa ndeye kushandisa diki diki diki kana chidimbu cheLego uye kuchera padivi pechidimbu kuti uise mwenje unotungamirwa. Mukati meLego block, iyo inowanzo kunge isina mhango, tinowedzera bhatiri, tambo uye switch yekuita kuti mwenje uvheneke kana kwete. Kune imwe mugumo webhokisi isu tinokwanisa kuwedzera ketani uye mhete kuti tiwanewo chepakutanga keychain ine zvakapetwa basa.
Ichi chirongwa chepakutanga chinogona kuvakwa nechero ani uye hatidi kuisa mari zhinji kuti tiwane mhedzisiro uye kunyangwe ekutanga marambi maumbirwo nekutenda kuLego kuvaka. Iwe haudi chero zvemagetsi kana yakaoma-kuwana-chikamu, izvi zvinogona kubudirira muchirongwa ichi.
Kuvaka kamera ine zvidimbu zveLego chinhu chiri nyore kuvaka, kunyange hazvo isiri yakachipa kana isingadhuri purojekiti senge yapfuura. Kune rimwe divi, tichada iyo PiCam, raspibheri pi Zero W, bhatiri rechargeable, LCD skrini uye switch. Kune rimwe divi tinofanirwa kuunganidza nekuunganidza zvese zvemagetsi nePiCam, mushure meizvozvo, isu tobva taisa izvo zvakaungana mudzimba dzakagadzirwa neLego block, imba yatinogona kugadzirisa kuravira kwedu uye zvatinoda, kuumba yakasarudzika kamera, yazvino digitaalinen kamera kana ingori yekare Polaroid kamera. Mune yekuchengetera ye Mirayiridzo Iwe unowana mimwe mienzaniso yemapurojekiti ane Lego zvidimbu izvo zvinokutendera iwe kuti uve nekasimba kamera asi iine retro mweya kana kunyange kugadzira makamera pasina Lego zvidimbu.
Homemade robhoti kana drone
Pamwe chirongwa chekare pane zvese asiwo chimwe chezvakanyanya kuomarara kuita nezvidimbu zveLego. Iyo pfungwa ndeyekugadzira pekugara uye kutsigira marobhoti akagadzirwa kubva kuLego zvidimbu. Kubudirira kwave kwakadaro uko Lego afunga kuvaka akawanda uye akawanda makiti ane mavhiri akasungirirwa kune block. Izvi zvinobvumidza marobhoti enhare kuvakwa uye kunyangwe idiki diki kuvaka nekupinda muhondo dzakakurumbira dzemarobhoti. Asi kufarira kwaLego mumarobhoti kwaenda kupfuura kupa zvikamu zvevavaki uye yakavhura yayo yega marobhoti uye marobhoti vachishandisa Lego zvidimbu uye zvemahara zvikamu.
Nekudaro, kit inozivikanwa kwazvo inonzi Lego Pfungwa Dutu, kit yekuunganidza robhoti inoshanda neLego zvidimbu. Iyo yekudzikira kweteki iyi mutengo wayo wepamusoro. Mutengo uyo usingawanikwe nemunhu wese. Asi izvi hazvireve kuti haugone kushandisa Lego zvidimbu zvemarobhoti ako, kure nazvo. Pamberi pemakiti aya, vanhu vaishandisa zvidimbu zveLego kugadzira marobhoti avo uye kana tikashanya iyo Instructables repository Iwe unowana akawanda akati wandei mapurojekiti anogadzira robhoti kubva kuLego zvidimbu.
Kudhinda kwe3D kwakabatsirwawo nezvidimbu zveLego, kunyangwe zvisiri kubudirira senge mune renyika re DIY kana mumarobhoti. Nekudaro, kune mapurojekiti anovaka 3D purinda ine Lego zvidimbu. Kubudirira kudiki kwechirongwa ichi, zvirinani kana zvichienzaniswa nemapurojekiti apfuura, Izvo zvinokonzerwa nekuti mubatanidzwa wezvikamu zveLego hauna kusimba sezvatingade uye unoburitsa kusagadzikana kunokanganisa kudhinda kwe3D, Kugadzira zvikamu zvehurombo hunhu.
Shanduko dzichangoburwa mune zvimwe Maprinta e3D akagadzirwa neLego zvidimbu zvakaderedza kusagadzikana uku zvakanyanya uye zvidimbu zvakadhindwa zvinowana mhando yepamusoro.. Muizvi link Iwe unogona kuwana mamwe emapurojekiti ayo anokwanisa kupurinda zvidimbu zvepurasitiki nechimiro chakagadzirwa nezvidimbu zveLego. Uye chinokatyamadza pane zvese izvi ndechekuti vanogona kugadzira zvidimbu zveLego, zvichiwedzera mukana wekugadzira mamwe Mahara Hardware mapurojekiti nezvidimbu zveLego.
Ndiwo ega mapurojekiti aripo?
Chokwadi ndechekuti kwete. Kubudirira kwezvidimbu zveLego kuri mukusingaperi kwavo uye mukusasungwa kune chimwe chimiro kana toyi, yakagadzira vazhinji vakuru-vakuru vakafunga izvi zvivakwa zvekuvabatsira ivo nemahara Mahara Hardware mapurojekiti. Kune akawanda mapurojekiti anogona kugadzirwa neLego zvidimbu asi chokwadi ndechekuti kana iwe waverenga izvo zvakapfuura, zvirokwazvo ikozvino urikufunga kuvaka imwe yacho. Uye ese anokwezva, kunyanya chirongwa chekuvaka robhoti Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Robotics » 5 Mahara Mahara Hardware mapurojekiti atinogona kuvaka neLego zvidimbu
Lorenzo Iago Sansano akadaro
Ndiri purofesa weTechnology. Iyi kosi ndakatenga 3D purinda (Prusa P3 Simbi) uye ini ndaunza 3rd gore revadzidzi veESO kudhinda ye3D. Ivo vagara vanobata chirongwa cheTINKERCAD chaizvo uye isu takaita zvidimbu zvidiki. Pfungwa yangu ndeyekuti vanogona kuvaka robhoti nezvikamu zvakadhindwa uye vatenge iyo Arduino bhodhi uye zvimwe zvemagetsi zvigadzirwa.
Ini ndaona mamwe maWebhu mapeji kwandinogona kusarudza asi vadzidzi vangu vane zvishoma zvishoma zvigadzirwa zvemagetsi uye ini ndingafarire chimwe chinhu chiri nyore kwazvo uyezve chinoita.
Unogona here kukurudzira chimwe chinhu kwandiri?
Pindura Lorenzo Yago Sansano
Kwaziwai! Rakanakisa ruzivo. Ndatenda!